बजेट, बेरोजगारी र विदेशको विकल्प - Karobar National Economic Daily
बजेट, बेरोजगारी र विदेशको विकल्प
query_builderJune 4, 2017 11:00 AM supervisor_accountरमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ visibility514
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति १० खर्ब, ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार विनियोजन ग-यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारका विषय प्राथमिकतामा परे, खुसीको कुरा हो । तर, बजेटका जति मोटा रकम छुट्टिऊन्, पीडा गरिबीमै ठोक्किँदो रहेछ । बजेट भाषणसँगै महँगी अकासिन्छ ।
शिक्षितवर्गका आफ्नै वेदना छन् । सकेसम्म वा पाएसम्म आफ्नै देशमा दक्षता पोखेर सेवा गर्ने अभिलाषा हुन्छ नै । जब सेवा आयोगले विभिन्न पदमा खुला प्रतियोगिताको आवेदन खुलाउँछ तब भोक न तिर्खा हुँदै ठूलो सपना बोकेर शिक्षितवर्ग मेहनतमा लाग्छ ।
जब कडा मेहनतबाट नाम निस्किन्छ तब राज्यव्यवस्थाप्रति मन साह्रै दुख्छ । नातावाद, कृपावाद, पार्टीहरूको सकेसम्म पहुँच लगाइन्छ, त्यति मात्र होइन घूसको प्रतिस्पर्धा बकाइदासँग चल्छ । हुँदाहुँदा ‘घूस खानु जघन्य अपराध हो’ भन्न पनि डरै लाग्ने बाध्यता छ । राजनीतिक भागबण्डा खुलेआम चलेको छ अनि जन्मिन्छ शिक्षितहरूमा— हीनताबोध ।
विश्वविद्यालय, कलेजका विद्यार्थीको भीड जति देखिन्छन् त्यहाँ यस्तै र यिनै बेरोजगारी पीडाका स्वर सुनिन्छन् । लाखौँ खर्च गरेर विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा वा सिएजस्ता विविध विषय लिएकाहरू हुन् वा अन्य कुनै सङ्काय उत्तीर्ण गरेका हुन्; आखिर निजी स्कुल वा अन्य संघसंस्थाका ढोकामा सानै रकमको नै किन नहोस्, नोकरीको भीख माग्दै हिँड्नुपरेको छ । पढ्ने बहानाकै कारण घरको काम गर्ने बानीसमेत हराइसकेको हुन्छ । शिक्षित युवा पुस्ताका लागि सीप र दक्षता पोख्ने अवसरमा आज ठूलो चुनौती छ ।
शैक्षिक दक्षता र गुणस्तरको सही मूल्याङ्कन भएमा देशले गरिबीको खोल भिरिरहनुपर्ने थिएन । योग्यताको भन्दा पैसामा बेचिएर पार्टीको दिग्विजय कस्तो हुन्छ, पीडा भोग्ने व्यक्तिलाई थाहा हुँदो रहेछ । शिक्षित बेरोजगारीका आन्तरिक समस्या र पीडा बुझ्न र अवसरका बाटा दिन नसक्नु नेपाल र नेपालीका विशाल समस्या हुन् । ‘आपूmले त पढिएन, कमसे कम छोराछोरीलाई त पढाऊँ’ भन्ने महान् इच्छा बाबुआमाको हुन्छ ।
बुढेसकालमा घरको सम्पूर्ण बोझ बोकेर बाबुआमाले छोराछोरीलाई ठूलो जागिरे बनाउने लक्ष्य राख्दै गाउँबाट पढ्नका लागि सहरतिर वा राजधानीतिर पठाउनुभएको हुन्छ । ठूलो जागिरे बनेस्; दसैँ या शुभसाइतमा आशीर्वाद दिँदासमेत बाबुआमाको एउटै आशा हुन्छ । आखिर दुवैतिरको पसिना हात लागि शून्य बनेपछि जन्मिन्छ— शैक्षिक हीनताबोध !
पढुन्जेल त विद्यार्थी नै हो, बाबुआमाले घरखेत खोस्रेर, ऋण गरेर पैसा पठाउँदै गर्नुहुन्छ । पढिसकेपछि अब को हुँ ? आफ्नै परिचय खोज्न शिक्षित मान्छे तड्पिन्छ । घरको जिलो बेचेर भए पनि पढ्न सकेजति पढ्ने मानसिकता राख्नु प्रगतिशील बौद्धिकता अवश्य हो । पढेको प्रमाणलाई सिरानी लगाएर सुत्नेको सपना केवल निदाउन्जेल मात्र साकार बन्ने विडम्बना छ ।
कर्म गर्ने अपेक्षा हु“दाहु“दै कर्मथलोको अभावमा तड्पिनेहरूका आन्तरिक समस्या समाधानसँग देश विकासको आशा जोडिएको छ । यो पनि सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रोन्नति युवा पौरखबाटै सम्भव छ, तर यी नेताजीको भाषणका लागि मजबुत खुराक मात्रै बनेका छन् ।
क्षमता पोख्ने वातावरणलाई जटिल बनाउने नीतिभन्दा अवसरका क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनु धेरै बुद्धिमानी हुन्छ । शैक्षिक तथा बौद्धिक क्षमताको उचित मूल्याङ्कन हुन सके मात्र देशले काँचुली फेर्ने अवसर पाउला ! आफ्नो देशमा पाखुरी बजार्न नै नपाउने विवशताका बाबजुद नै कैयौँ दक्ष युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुपरेको छ । विकल्पको खोजीमा देशको दक्ष पौरख नचाहेर पनि परदेशमा बेचिरहेको देख्दा मन कटक्क हुन्छ । अझ अवसर पाइहाले पनि नातावाद, कृपावादले हीनताबोधलाई मलजल गराउँछ ।
तर, जुन सरकार बन्छ त्यहाँ आफ्नो सत्ता स्थायित्वको लालसा भइरहन्छ । भाषण जनताको सेवाका लागि गरिन्छ, व्यवहारमा विपक्षी पार्टीको विरोध या त खुसी बनाएर सरकार टिकाउने ध्याउन्नको साझा नीति र संस्कारी सरुवा रोगको असरबाट अछुतो छैन देश । जनतालाई दबाबमा पारेर भन्दा स्वच्छ सेवाको परिचय दिने जुनसुकै पार्टी, जनताका आँखामा बिझाउँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच नभएका युवावर्गमा परेको छ ।
अर्को विकल्पमा देशमै जागिर खाने मन भए पढाइका साथमा राजनीतिक दक्खल मजबुत पार्न झन्डा बोक्नुपर्ने हुन्छ; तसर्थ रोजगारीको आवेदनका साथमा सोधिन्छ, “तपार्इं कुन पार्टीको मान्छे ?” हुन त शिक्षा र राजनीति आपैmँमा पृथक् क्षेत्रका विषयहरू हुन् । यद्यपि पढेर मात्र हुँदैन, जागिर खाने नै हो भने त कुनै दह्रो पार्टीगत दक्खल हुनैपर्छ भन्ने कुरामा शिक्षित वर्ग लगभग अभ्यस्त नै छन्, सायद ।
तसर्थ, शिक्षाको मन्दिरमा राजनीतिको वृक्ष निर्लज्ज हुर्कन्छ, यसमा कसैले आपत्ति जनाएको पनि खै, लाग्दैन । राजनीतिक पहुँच बढाउन चाहनेले कलेजमा भर्ना भएर त्यहीँबाट सुरु गर्ने संस्कार पनि नौलो होइन । यसर्थ कलेज नै राजनीति गर्ने थलो पनि बनेकै छ । अर्कातिर पढेको तर राजनीतिक पहुँच नहुनेले बाबुबाजेले अपनाएको पुरानो पेसालाई सम्हाल्दा पनि उसलाई समाजको हाँसोको पात्र बन्ने डर हुन्छ । प्राचीन कर्म आपैmँमा दोषी छैन, तर समाजले गीत गाइदिन्छ— ऊ मनोवैज्ञानिक हिसाबमा दमित बन्छ ।
समाजले आफ्नो बारीमा श्रम पोख्ने शिक्षित वर्ग स्तरीयताको बारभित्र थुनिदिन्छ । त्यसैले म्यानपावरका एजेन्टलाई लाखौँ रकम बुझाएर वैदेशिक रोजगारीका निम्ति समुद्रपारि जान चाहन्छ, शिक्षित बेरोजगार । यदि कसैलाई ऊप्रति दुस्मनी भए भन्दा हुन्— खुब पढेको ठान्थिस् नि आपूmलाई ! आपूmसँगका साथीहरू पढाइ छोडेर पहिले नै विदेश गएका हुन्छन् ।
सम्भव भएसम्म अलिअलि भौतिक उन्नति गर्लान् । कमाउने साथीले पढ्न नसकेकोमा खेद व्यक्त गरिरहँदा त्यो बेरोजगारीले आपूmमा रहेको अभावलाई मात्र हेरिरहन्छ, यो उसको कुण्ठाको उत्कर्ष हो । यद्यपि कर्मशील शिक्षित युवाहरू गाईपालन, बाख्रापालन, बङ्गुरपालन, मौरीपालन वा आधुनिक खेती प्रणालीजस्ता अन्य घरेलु व्यवसायतिर उन्मुख हुनु भने आपैmँमा गौरवको विषय हो, घरेलु उद्योग विकासको सशक्त माध्यम हो । यसमा राजनीतिक पुजारी र कसैलाई खुट्टा ढोग्न जानुपर्ने विवशता सायद कम होला ।
धेरै अवस्थामा भने पुँजीको अभावले कैयौँ प्रगतिशील युवाका योजनाले साकार हुन पाएका हुँदैनन् । बाटा त होलान्, तर सबैले अवसरलाई मन भएर पनि बजार व्यवस्थापनजस्ता विविध कारणले अवलम्बन गर्न सक्दैनन् ।
वास्तविकतालाई नियाल्दा आज हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू झन्डा बोकेर मैदानमा दौडिनुको औचित्य पार्टीको सिद्धान्तको भावनात्मक समर्थन मात्रै होला भन्न सकिन्न । जब मान्छेले अधिकार र अवसर पाउँछ तब उसलाई बाटामा दौडिने फुर्सदै कहाँ हुन्छ र ! जसले शिक्षा र सभ्यताको ठूलो सपना देख्न सिकाएका हुन्छन् तिनैले अन्तमा अभावको झोला भिराएपछि अर्को थप बोझको बर्को ओढाई विदेश पलायन हुन विवश बनाउँछन् । सबै जना मेडिकलमा पास हुँदैनन्, त्यहाँ पनि जन्मिन्छ— शैक्षिक हीनताबोध ।
यद्यपि यो पनि थाहा छ, तिनले देशलाई दोष दिएका छैनन्, किनकि तिनका फेसबुक स्टाटसमा नेपालको महिमा हुन्छ । साथीलाई को–कमेन्ट (प्रतिक्रिया) मा पनि भनिन्छ— त्यत्रो पढिसकेपछि पनि विदेश !